तत्कालीन माओवादी कोटाबाट राजदुत बनेकि लक्कि शेर्पा विवादपछि काठमाडाैंमा , सरकारले लिन सक्ला ‘एक्सन’ ? – www.agnijwala.com
तत्कालीन माओवादी कोटाबाट राजदुत बनेकि लक्कि शेर्पा विवादपछि काठमाडाैंमा , सरकारले लिन सक्ला ‘एक्सन’ ?
काठमाडाैं । तत्कालीन माओवादी कोटाबाट राजदुत बनेकि लक्कि शेर्पा काठमाडौ आएकि छिन् ।अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोधपुछका लागि बोलाएपछि काठमाडाैं अाएकी हुन् । राजदूत शेर्पामाथि उनकै चालक वाड्चु शेर्पाले मानव तस्करीको आरोप लगाएपछि अचानक विवादमा परेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रालयले शेर्पाका विषयमा लागेको आरोपमाथि सत्यतथ्य बुझ्न मन्त्रालयले उनलाई काठमाडाैं बोलाएको हो ।
छोटो समयमा कुतनीतिक मर्यादाभित्र शान र मान कमाउन सफल राजदूत शेर्पामाथि आफ्नै कामदारले यसरी पैसाको आरोप लगाउँदै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय निकै गम्भीर बनेको हो । मोटो रकम असुलेर कामदारका रूपमा आफूलाई अस्ट्रेलिया ल्याएको र श्रीमतीलाईसमेत यता ल्याउन थप पैसा मागेका उनका पूर्वचालक वाड्चु शेर्पाले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आमा क्यान्सरले गुमाएको र अहिले श्रीमतीलाई समेत जेल हालेर मार्न खोजेपछि बाध्य भएर आफू मिडियामा सार्वजनिक हुनुपरेको वाड्चु शेर्पाले बताएका छन् । बिभिन्न सञ्चार माध्यममा राजदूतका विषयमा आरोप आउन थालेपछि मन्त्रालयले राजदूत शेर्पालाई काठमाडाैं बोलाएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनी दोषि पाइएमा बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोषि ठहरिएमा उनी अब राजदुतका लागि अष्ट्रेलिया जान पाउने छैनिन् ।
तर पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड सङ उनको सम्बन्ध राम्रो भएकोले हलचल गर्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।